Wasiirka Madaxtooyada Oo Kulan Ballaadhan La Yeeshay Saladiinta Iyo Cuqaasha Gobolka Togdheer Oo Isu Dhan Maxa Ka Soo Baxay.??.+Sawiro | Somaliland Today
← DAAWO:Marwada Madaxwaynaha Somaliland Oo Xadhiga Ka Jartay Dhakhtar Laga Hirgaliyey Magaalada Wajaale
Adigu matahay Qof xorr ah?….W/Q: MOHAMOUD ARAB (SABUUB) →
Wasiirka Madaxtooyada Oo Kulan Ballaadhan La Yeeshay Saladiinta Iyo Cuqaasha Gobolka Togdheer Oo Isu Dhan Maxa Ka Soo Baxay.??.+Sawiro
(SLT-Burco) Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Mud. Xirsi Cali Xaji Xasan oo ay weheliyaan Wasiiru dawlaha Maaliyada iyo Wasiir ku-xigeenka Beeraha, ayaa kulan ballaadhan la qaatay Saladiinta, Cuqaasha iyo Wax garadka Gobolka Togdheer. Kulankan oo ka qabsoomay Huteelka City Plaza Hotel, Qaybtiisi hore oo ahayd Qado sharaf marti qaad ah oo Wasiirku fidiyay, kadib markii Hadhimo sharafeedku dhammaatay waxa qabsoomay shir ballaadhan oo Cuqaasha iyo Saladiintu la yeelatay Wasiirada.
Waxaana halkaas ka hadlay Cuqaasha Gobolka Togdheer, kuwaas oo si weyn u xusay Wax qabadka Xukuumadda Madaxweyne Axmed Silaanyo, sidoo kale waxay u qadimeen baahiyaha Gobolka ka jira, iyagoo xusay xoojinta ammaanka Gobolka iyo dhismaha Jeelka weyn ee Magaaladda oo baahi badani ka taagan tahay.
Suldaan Maxamuud Xaji Xusen oo kamid ah Saladiinta Gobolka Todheer, oo isna ka hadlay shirkaas, ayaa sheegay inay Xukuumaddu cashuur yar uga jarto xoolaha tirada badan ee Gobolka ka gudba, kuwaas oo aanay ka qaadin wax cashuur ah. Suldaan Maxamuud Guuleed Mire oo isna ka goobti shirka hadal ka jeediyay, ayaa sheegay muhiimada ay midnimadu leedahay. Wasiir ku-xigeenka Beeraha iyo Wasiiru dawlaha Maaliyada, ayaa iyaguna dar daaran dheer u jeediyay Madax dhaqameedka Gobolka Togdheer.
Wasiirka Madaxtooyada Somaliland, Mud. Xirsi Cali Xaji Xasan oo soo xidhay xaflaas, ayaa uga mahad celiyay Madaxdhaqameedka Gobolka Togdheer, siday u soo xaadireen Shirka iyo waliba dhiiri galintooda ay qireen Wax qabadka Xukuumadda, sidoo kale wuxuu u soo jeediyay Madax dhaqanka Gobolka Togdheer inay dib u dar dar galiyaan guddidii horumarinta Gobolka oo wax badan ka qabtay Gobolka. Guud ahaan shirka ayaa laga dheehanaayay is afgarad ka muuqday Madax dhaqameedka Gobolka iyo Waftiga Wasiirada.